Soo ogow jimicsiyada ugufiican ee caloosha lumiyo | Ragga Stylish
Jimicsiyada ugu fiican ee caloosha lumiyo waa kuwa isla kaa caawinaya inaad gubto dufanka badan guud ahaan. Tixgelinta xaqiiqdaas waa mid ka mid ah sirta lagu guuleysto ujeeddadaas. Laakiin waa in aan la iloobin taas marka lagu daro ku guuleysato gubashada dufanka waxqabadka leh, waa inaad sidoo kale u qorsheeysaa quudinta qaab ku habboon.
Labadan arrimood (jimicsi iyo cunto) gabi ahaanba lama qaybin karo markay timaado luminta dufanka caloosha.. Kalooriyada la cuno iyo kuwa la kharash gareeyo waxay saameyn toos ah ku leeyihiin qaybtaan jirka, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dhibcaha daciifka ah ee ragga.
Tirada kalooriyada la isticmaalay waa inay ka badnaato tirada kalooriyada laqiiqay si loogu qasbo jirka inuu isticmaalo baruurta keydsan. Tan si aad u gaartana waa inaad la socotaa kalori qaadashada cuntada iyo inaad sameyso jimicsiyo kordhinaya gubashada kaloriinta maalin kasta.
1 Tababar si aad u lumiso caloosha
2 Tababbarka xoogga
2.1 Khuraafaadka ah fadhi ku dirirka
3 Tababbarka wadnaha
Tababar si aad u lumiso caloosha
Kuma filna in hal weji laga weeraro. Jimicsiyada lagu lumiyo caloosha waa inay ahaadaan labadaba xoog iyo nooca wadnaha. Fikrad ahaan, waa inaad isku dartaa labada jimicsi hal fadhi. Kuwa soo socdaa waa layliyo labada qaab oo kaa caawin doona inaad abuurto jimicsi caloosha oo dhammaystiran.
Inta jeer ee jimicsiga waxay kuxirantahay midkasta. Haddii aadan haysan waqti badan, tababarka toddobaadkii laba jeer ayaa ka wanaagsan waxba, laakiin fikraddu waa inay ahaato mid joogto ah intii suurtagal ah adigoon ilaawin inaad nasasho qaadato waqti ka waqti.
Riixitaanka waa nooc soo jireen ah oo had iyo jeer mudan in lagu daro tababarkaaga. In kasta oo ay ka caawiyaan inay ka shaqeeyaan gobolka caloosha wax yar, tabarucaadka ay luminta caloosha ee riixitaanka waxaa badanaa lagu ogaadaa tirada kalooriyeyaasha jirku lumiyo markaad jimicsigaan sameyneyso.
Layli kale oo layaableh oo loogu talagalay dhaqaaji dheef-shiid kiimikaad inta aad shaqeyneyso muruqyada jirka ugu waaweyn waa squats. Xusuusnow in, si aad waxtar u yeelato, ay muhiim tahay inaad si sax ah u fuliso. Si tan loo sameeyo, istaag cagahaaga gooni, qiyaas ahaan safka garbahaaga. Caadi ahaan waxaad ku soo noqotaa booska bilowga marka bowdyaha ay barbar socdaan sagxadda. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku daabacan kartaa xoogga ugu badan squat kasta adoo hoos u dhigaya sida ugu macquulsan.
Oo ay ku jiraan looxyada tababarka xoogga ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay kor u qaadaan gubashada dufanka caloosha.. Jimicsiyada lagu lumiyo caloosha waxaa loo jeedin karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah. Tani waxay diiradda saaraysaa waxa loogu yeero nukleus. Ku samee loox leh gacmo fidsan oo xaji booska 20 ilbidhiqsi. Hubso in jidhkaagu samaynayo xariiq toosan iyo, wixii ka sarreeya oo dhan, inaad caloosha si fiican u qabsato inta lagu jiro jimicsiga si loo kordhiyo waxtarkiisa.
Faa'iidada ay leedahay inaad ku shaqeyso miisaankaaga jirka ayaa ah, maadaama aalad aan loo baahnayn (marka laga reebo derin mararka qaarkood), waad tababaro kartaa waqti kasta iyo goob kasta. Taas oo aan macnaheedu ahayn inaysan noqon karin ku dar xoogaa jimicsi ah oo leh culeys tababarkaaga haddii aad suurogal tahaysida curisyada bicep ama barafka. In kasta oo ay leeyihiin kala duwanaanshahooda, labada ikhtiyaar (miisaanka jirka iyo culeyska) waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta adkeysiga iyo xoogga iyo dufanka gubanaya, taas oo ah waxa ku saabsan.
Khuraafaadka ah fadhi ku dirirka
Muddo dheer ayaa la aaminsanaa in abdominals ay gacan ka geysan karaan luminta caloosha kaligood. Hadda waxaa loo yaqaan inay waxtar u leeyihiin qeexidda iyo xoojinta aagga, laakiin kuma filna markay tahay ka takhalusidda dufanka ku urursan jirka dhexdiisa. Waa lagama maarmaan in lagu daro iyaga oo ku jira tababar aad u ballaadhan oo saameynaya dhammaan qaybaha jidhka oo aan ku koobnayn hal. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad leedahay calool fidsan, way kaa caawin karaan inaad xoqdo, laakiin haddii kale, waa inaad si ballaadhan uga fikirtaa.
Orodka, dabaasha, iyo baaskiil wadista ayaa ah layliyada wadnaha ee ugu caansan. Waxayna sidoo kale kamid yihiin laylisyada ugufiican ee caloosha lumiyo iyo guud ahaan dufanka gubanaya. Kaliya socodka wadanka ama magaalada sidoo kale waxay bixisaa natiijooyin aan caadi aheyn markay tahay gubida dufanka xad dhaafka ah ee jirka kujiro, oo ay kujirto baruurta caloosha. Laakiin waa inay ku socotaa xawaare degdeg ah.
Haddii aad ku jirtid qolka jimicsiga, treadmills, mashiinnada elliptical iyo baaskiilada jimicsiga ayaa ah xulafadaada. Tixgeli tababbarka bareegyada (ku-beddelashada xoojinta dhexdhexaadka ah oo leh xoojin xoog leh) haddii aad rabto inaad si dhakhso leh u gubto baruurta.
Sidoo kale waa suurta gal in xoogaa wadnaha la sameeyo iyadoon guriga laga bixin. Dareenkaan, burpees waa fikrad aad u fiican. Waana kuwo aad u baahan, ku celcelin badan ayaa lagu sameeyaa nasasho la'aan, taas oo ah sababta ay ugu fiicnaadaan gubashada dufanka, xitaa nooca ugu adkaysi badan. Tani waa layli laba-hal ah. Marka hore waxaad ku riixdaa kor-u-qaadista dhulka oo waxaad ku soo gabagabeyneysaa boodbood xoog leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Jimicsiyada si ay caloosha u weynaadaan